कसलाई पछ‍्याउँछन् सेलिब्रिटीहरू ? - जीवनशैली - कान्तिपुर समाचार
फाल्गुन १५, २०७३-प्रत्येक महिना ३१ करोड ३० लाख मानिसले ट्वीटरमार्फत् अनेक विचार व्यक्त गर्दै आएका छन् । हालै ह्वाइट– हाउस प्रवेश गरेका राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रम्प ट्वीटरमा निकै एक्टिभ छन् । उनी कतिपय महत्त्वपूर्ण घोषणा ट्वीटरमार्फत नै गरिदिन्छन् । त्यसले संसारभर सनसनी मच्चाइदिने गरेको छ ।
बलिउड अभिनेता अमिताभ बच्चनले १ हजार बढीलाई फलो गरेका छन् भने उनलाई फलो गर्नेको संख्या २ करोड ५२ लाख छ । बच्चनले थुप्रै खेलाडी, फनी ट्वीटस, फस्ट लेडीहरूको अर्काइभ र प्रेरणादायी भनाइ उल्लेख गरिएका अकाउन्टहरू फलो गरेका छन् । उनले रेस्लर जोन सिनाको फयान क्लब, चेल्सी क्लब, बिल गेटस् आदिको ‘पिछा गर्न’ चाहेछन् । २ करोड फलोअर्स भएका आमिर खानले क्रिकेटर सचिन तेन्दुलकरबाहेक बाँकी ८ जना कलाकारलाई फलो गरेका छन् । कोलम्बियन गायिका साकिराले मलाला फन्ड, गेट्स फाउन्डेसन, पोप फ्रान्सिस गरी १ सय ९२ जनालाई फलो गरेकी छन् । ४ हजार ५ सय २ वटा टीट गरिसकेकी उनलाई ४ करोड ३० लाखले फलो गरेका छन् । सलमान खानले सुरज पन्चोली, शाहरूख र आमिर खान गरी २३ जनालाई फलो गरेका छन् ।
स्वामी रामदेव - च्याकी च्यान
‘भाग्यले बाँचेकाहरू’ लाई अर्को अवार्ड ›